Maamulka Degmada Howlwadag oo sheegay in ciidamadu ku guuleysteen xaqiijinta ammaanka degmadaasi | Radio Muqdisho
Maamulka Degmada Howlwadag oo sheegay in ciidamadu ku guuleysteen xaqiijinta ammaanka degmadaasi
Published on January 28, 2013 by Mowliid · 1 Comment · 1,568 views
Maamulka Dagmada H/wadaag ayaa sheegay in amaanka degmadaasi uu yahay mid la isku haleyn karo, kadib markii ay ciidamadu ku guuleysteen sugida Ammaanka degmadaasi.
Gudoomiyaha degmadaasi Maxamed Xuseen Jacfar oo saxaafada kula hadlay gudaha suuqa Bakaaraha ayaa sheegay in amaanka suuqa weyn ee Bakaaraha uu yahay mid wanaagsan oo la isku haleynkaro, kadib markii ay ciidamadu xaqiijiyeen amaanka isla markaana la furay wadooyinka dhex mara suuqaasi.
Sidoo kale gudoomiyaha ayaa intaa ku daray in burburinta dhismoyinka sharcidarada aha iyo furida wadooyinka ay gacan ka geysteen sugida amaanka suuqaasi, isagoo hoosta ka xariiqay in wadooyinka dhex mara suuqaasi ay dhamaantood furanyihiin.
Dhanka kale gudoomiyaha ayaa xusay in amaanka guud ee degamada Howlwadaag uu hagaagsantahay, isagoo tibaaxay in sugida amaanka ay iska kaashadeen ciidamada amaanka iyo dadweynaha ku nool degamdaasi, wuxuuna intaa ku daray in ay socoto qorshe dib loogu howlgelinayo suuqii Ceelgerweyne oo yaala degmada Howlwadaag kaas oo ku burburay dagaaladii ka dhacay caasimada Muqdisho.
wadani says:	January 28, 2013 at 12:33 pm	waaw viva holwadaaag degmadii aan ku dhashay daanahay dadkaagii waan kusoo soconaaa arin wanaagsan ayaan maqleynaa allow meel lagu nafto kaadhig degmooyinka kalane sidaas iyo si lamid ah